१ चैत, ललितपुर । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा भएका जनशक्तिलाई सरकारको समृद्धिको लक्ष्य र जनताको जीवनसँग गाँस्नुपर्ने बताउनुभएको छ । छ दशकअघिका नीति तथा रणनीतिहरु कार्यान्वयन र परिमार्जन गराउने उद्देश्यका साथ विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७५ को मस्यौदामा सुझाव लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले […]
२०११ सालमा काठमाडौंको पकनाजोलमा जन्मिएका प्रा. डा. उदयराज खनाल ३५ बर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय भौतिकशास्त्र विभागमा प्राध्यापन पेशामा आवद्ध हुनुभयो । उदयराज खनाल नेपालका सुप्रसिद्ध विद्वान्, समालोचक, कूटनीतिज्ञ र प्रखर बुद्धिजीवी पिता सरदार यदुनाथ खनालका पुत्र हुनुहुन्छ । यदुनाथ खनालको कूटनीतिक क्षमतालाई बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले मात्र होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद […]
विगतमा नाष्टका प्राज्ञ समेत रहनु भएका ४७ वर्षीय डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट)को उपकुलपति हुनुहुन्छ । २ पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनु भएका श्रेष्ठले जापानको ओसाका सङ्ग्यो विश्वविद्यालयवाट वातावरणीय विकास इन्जिनियरिंगमा विद्यावारिधी गर्नु भएको हो । २० बर्ष भन्दा बढी निजी, सरकारी र गैरसरकारी सँस्थाहरु काम गर्नु भएका अनुभवी श्रेष्ठले युएनडीपी, बिश्व […]
नाष्टले ५ महिनापछि बल्ल पायो उपकुलपति
माघ ९, काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट)को उपकुलपतिमा डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । अस्ति सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उहाँलाई ४ वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको हो । नाष्टका प्राज्ञ समेत रहनु भएका ४७ वर्षीय श्रेष्ठ २ पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनु भएका थियो । श्रेष्ठले जापानको ओसाका सङ्ग्यो विश्वविद्यालयवाट वातावरणीय विकास इन्जिनियरिंगमा विद्यावारिधी […]
विद्यालयमा सौर्य ऊर्जा जडान
९ पुस, म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका तीन सामुदायिक विद्यालयमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको हो । मालिका गाउँपालिकाको राष्ट्रिय मावि, डाँडागाउँको अमरज्योति मावि र देवीस्थानको भीम […]
९ पुस, रुपन्देही । किशोरकिशोरी तथा युवामाथि हुने जोखिम कम गर्न सरकारले मोबाइल एप्स ‘खुल्दुली’ शुभारम्भ गरेको छ । किशोरकिशोरी तथा युवा युवतीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना दिने उद्देश्यले तयार गरिएको मोबाइल एप्स खुल्दुली आज बुटवलमा एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष र जर्मन विकास नियोगको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या […]
९ पुुस, ललितपुर । नेपालको एकमात्र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित डिटिएच, डिस होम नेपाल कम्पनीले इन्टरनेट सेवा पनि प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । डिटिएच टेलिभिजन च्यानल हेर्न सजिलो बनाउने आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा हो र यसले टेलिभिजन ‘सिग्नल’ लाई नागरिकको घरघरमा रहेका टेलिभिजन सेटसम्म सफा र राम्रोसँग हेर्न मिल्ने गरी सेवा प्रदान गर्दछ । पैसा […]
विद्युत् प्राधिकरण र मध्य त्रिशूली गङ्गाबीच पिपिएमा हस्ताक्षर
९ पुस, बेत्रावती । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माणाधीन ‘मध्य त्रिशूली गङ्गा जलविद्युत् आयोजना’सँग विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । पर्पेmक्ट इनर्जी डेभलप्मेन्ट प्रालि प्रवद्र्धक रहेको १९.४१ मेगावाट क्षमताको आयोजनामार्फत उत्पादित विद्युत् खरीदका लागि कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता कार्य सम्पन्न भएको हो । दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट सुक्खायाममा (मङ्सिर १६ […]
आणविक ऊर्जा सम्बन्धी गोष्ठी काठमाडौँमा शुरु
२४ मङ्सिर, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले आज आयोजना गरेको कार्यशालामा विज्ञहरूले परमाणु प्रविधिको सुरक्षित उपयोगले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । परमाणु विज्ञान तथा प्रविधिको शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको हो । परमाणु प्रविधिको सुरक्षित […]
मानिसलाई करेन्ट लाग्ने कारणहरु
हाम्रो दैनिक जीवनमा करेन्ट लागेका घटनाहरु देखी र सुनी राखेका हुन्छौ । हामीलाई विद्युत् झट्का तब मात्रै लाग्छ जब करेन्ट हाम्रो शरीरबाट प्रवाह हुन थाल्छ । विद्युत् धारा हाम्रो शरीरबाट प्रवाह हुनुमा दुई अवस्था आवश्यक छ । एउटा हो, यसका लागि हाम्रो शरीरबाट विद्युत् बहनका लागि एउटा पूर्ण विद्युत् परिपथ बन्नुपर्छ । अर्को कारण, शरीरको […]
आइन्स्टाइनको प्रकाश विद्युतीय प्रभाव (Einstein’s Photoelectric Effect)
विलक्षण प्रतिभका धनी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित महान् बैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइन वीसौं शताब्दीका शिखर पुरुष हुन् । संसारमा केही यस्ता व्यक्ति जन्मन्छन्, जसको असाधारण प्रतिभा र योगदानले विश्व र मानव समाजमा अमिट छाप छाडेको हुन्छ । उनले विश्वलाई मानव दृष्टिकोणमा जुन प्रकारको परिवर्तन ल्याए, त्यस्तो अरू कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले आजसम्म ल्याएका छैनन् । उनलाई अहिलेसम्मको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मानव […]
६ कात्तिक, बलेवा । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले मोबाइल एप्समार्फतसर्वसाधारणका गुनासो सम्बोधन गर्ने कार्य थालनी गरेको छ । नगरपालिकाले मोबाइल एप्समार्फत सर्वसाधारणले नगरका कामको विषयमा राखेका जिज्ञासा र काम कारवाहीका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ मोबाइल एप्समार्फत नै दिने कार्यको थालनी गरेको हो । नगरपालिकाका नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट र कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यको विषयमा जानकारी […]
के आगोले पनि आगो निभाउन सक्छ ?
हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पानीले आगो निभाउछ । तर आगोले पनि आगो निभाउन सक्छ भने बिषयमा अवगत नहुन सक्छ । सुन्दा अचम्म लागे पनि यो त्यतिकै सत्य हो जति फलामले फलाम काट्छ भन्ने झैँ आगो बालेर आगो निभाउने काम पनि निश्चित समयमा दक्ष व्यक्तिले मात्र गर्न सक्दछन् । उपयुक्त समयका यकिन […]
बैज्ञानिक धारणा अनुसार जनै लगाउनुका फाइदाहरू
हिन्दूका सोह्र संस्कारमध्ये एक ब्रतवन्ध गर्दा बैदिक मन्त्रका साथ गुरूले जनै पहिराइदिने प्रचलन रहेको छ । हिन्दूहरूले बायाँ काँधबाट छड्के पारी दायाँ हातमुनी खोकिलासम्म पहिरिने सेतो सुती धागोबाट बनेको पवित्र धार्मिक डोरीलाई जनै भनिन्छ । हिन्दु परम्परामा व्रतबन्ध गर्ने विधान छ । धार्मिक शास्त्र अनुसार, मनमस्तिष्क र चित्त शुद्धिका लागि व्रतबन्ध गरिन्छ । शरीरमा रहेका सूक्ष्म […]
२३ असोज, जिक्वान, चीन । चीनले जिक्वान अन्तरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्रबाट दुईवटा रिमोट सेन्सिङ उपग्रह सफलतापूर्वक मङ्गलबार प्रक्षेपण गरेको छ । चिनीया अधिकारीहरुका अनुसार यी दुबै उपग्रहहरु लङ मार्च–२सी रकेटको प्रयोग गरी अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको हो । यी उपग्रहहरु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वातावरण सर्भेक्षण र यससँग सम्बन्धित अन्य प्रविधि परीक्षणमा उपयोग गरिने छ । लङ मार्च रकेटको यो […]